Side ku noqon kartaa maamule wanaagsan? | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Aug 11, 2015 - 3 Jawaabood
In urur kasta ama shirkad kasta waxaa lagama maarmaan ah inay leedahay maamule howsha shirkada kala wado .
Hadaba muhiimada ma ahan in maamule kaliya ee waxaa muhiim ah maamule wanaagsan inuu lahaado ururkaas ama shirkadaas sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo qaar ka mid ah sida lagu noqon karo maamule wanaagsan.
1.Dhiiri geli shaqaalahaaga
2.U sameey dadka wax wanaagsan.
3.U sheeg shaqaalahaaga waqtiga shaqada lasoo galaayo lagana baxaayo.
4.In aad dajisid hadafkaada.
5.Hubi in shaqaale walbo waxa laga filaayo inuu ogyahay.
6.Masuuliyada howlaha shaqo qeebinta
Maxamuud xaashi Maxamuud says:
crisaaq Xaaji xuseen says:
Maxamed yuuke says:
Mnclah waa suuaalo ku anfacaya